Isoftware yokuMakisha yeLaser ye-EZCAD, uMlawuli, iNtloko yeSkena seGalvo-JCZ
I-ezcad2 kunye ne-ezcad3 zizoftware eziguquguqukayo zeentlobo ezahlukeneyo zokulungiswa kwelaser nge-laser galvo scanner. iyahambelana neendidi ezininzi ze-laser kunye ne-galvo kwimarike kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
I-LMC kunye ne-DLC2 yolawulo lwe-laser isebenza nesoftware ye-ezcad, ekwaziyo ukulawula uninzi lweelaser (IFIBERI, i-CO2, i-UV, iGreen ...) kunye neskena se-galvo (XY2-100, sl2-100 ...) kwimarike.
I-axis 2 ekhethiweyo kunye ne-3 axis laser galvo scanner ziyafumaneka, ukusuka ku-stanard precision ukuya kwi-ultra precision ngesantya esiqhelekileyo kunye ne-utrl-high speed.
Sibonelela ngoluhlu olupheleleyo loyilo lwe-laser optics kunye nokuvelisa okufana ne-F-theta scan lens, i-boram expander, kunye nokujolisa kwiilen ngeendlela ezahlukeneyo zokwaleka kunye nezinto eziphathekayo.
Sizisa umthombo we-laser othembekileyo, owenziwe e-china okanye kwamanye amazwe kunye namanye amacandelo njengephakheji ye-laser, ngexabiso elinokhuphiswano kakhulu.
Sivelisa oomatshini bokulungisa i-laser ye-welding, ukusika, ukusika i-resistor, ukubopha ... zombini oomatshini abasemgangathweni kunye nabenziweyo.
Umgangatho, ukuSebenza, ukuSebenza ngeNdleko kunye neNkonzo.
Amava eminyaka eli-16 kwicandelo le-laser lenza i-JCZ kungekuphela nje ishishini elikhokelela phambili ekuphuhliseni nasekuveliseni imveliso ye-laser kunye nokuhanjiswa kweemveliso kodwa ikwangumthengisi onokuthenjwa kwiindawo ezahlukeneyo ezinxulumene nelaser kunye nezixhobo eziphuhlisiweyo kwaye zenziwe zodwa, ziphantsi, zibambe, utyalomali iinkampani kunye namaqabane qhinga.
Iskena seLaser Galvo
Isoftware ye-EZCAD2 yasungulwa ngo-2004, unyaka eyasekwa ngawo i-JCZ. Emva kokuphuculwa konyaka we-16, ngoku ikwisikhundla esiphambili kushishino lokumakisha i-laser, ngemisebenzi enamandla kunye nozinzo oluphezulu. Isebenza nomlawuli we-LMC we-laser. E-China, ngaphezulu kwe-90% yomatshini wokumakisha we-laser ukunye ne-EZCAD2, nakwamanye amazwe, isabelo sayo sentengiso sikhula ngokukhawuleza okukhulu. Cofa ukujonga ezinye iinkcukacha malunga ne-EZCAD2.
Isoftware ye-EZCAD3 ye-laser yasungulwa ngo-2015, yazuza njengemisebenzi emininzi kunye neempawu ze-Ezcad2. Inesoftware eqhubele phambili (njenge-64 software kernel kunye nokusebenza kwe-3D) kunye nolawulo lwe-laser (ehambelana neendidi ezahlukeneyo zelaser kunye ne-galvo scanner). Iinjineli zeJCZ zijolise kwi-EZCAD3 ngoku, kungekudala, izakuthatha indawo ye-EZCAD2 ukuze ibe yenye yesoftware eyaziwayo yokulungiswa kwe-laser galvo njenge-2D kunye ne-3D yokumakisha i-laser, i-laser welding, i-laser cutting, i-laser yokomba ...
Isisombululo sesoftware yokushicilela i-JCZ 3D iyafumaneka kwi-SLA, i-SLS, i-SLM, kunye nezinye iintlobo ze-3D laser prototyping ye-SLA, sinesoftware enesiko ebizwa ngokuba yi-JCZ-3DP-SLA. Ilayibrari yesoftware kunye nekhowudi yemithombo yeJCZ-3DP-SLA ikwakhona. Kwi-SLS kunye ne-SLM, ilayibrari yesoftware yokuprinta ye-3D iyafumaneka kubahlanganisi benkqubo yokuphuhlisa eyabo isoftware yokuprinta i-3D.
I-EZCAD ikhithi yophuhliso lwesoftware / i-API kuzo zombini i-EZCAD2 kunye ne-EZCAD3 iyafumaneka ngoku, uninzi lwemisebenzi ye-EZCAD2 kunye ne-EZCAD3 ivulelwa abahlanganisi benkqubo ukwenza isoftware eyodwa yesicelo esithile, kunye nelayisensi yobomi.
Laser Resistor Ukucheba Machine atTS4410F-C50
Inkqubo yokucheba i-Laser Resistor
Beijing JCZ Technology Co., Ltd, eyaziwa ngokuba JCZ yasekwa ngo-2004 Kuyinto ishishini eliphezulu-zobugcisa eyaziwayo, abazinikele unikezelo laser umqadi kunye nolawulo ezinxulumene nophando, uphuhliso, imveliso kunye nokudibanisa. Ngaphandle kweemveliso zayo eziphambili zenkqubo yolawulo lwe-laser ye-EZCAD, ekwindawo ephambili kwimarike e-China nakumazwe aphesheya, i-JCZ ivelisa kwaye isasaza iimveliso ezahlukeneyo ezinxulumene nelaser kunye nesisombululo sabadibanisi beenkqubo ze-laser njenge software ye-laser, isilawuli se-laser, i-laser galvo iskena, umthombo we-laser, i-laser optics…
Kude kube ngunyaka we-2019, sinamalungu ali-178, kwaye ngaphezulu kwama-80% abo ngamagcisa anamava asebenza kwiR & D nakwisebe lenkxaso kwezobuchwephesha, ukubonelela ngeemveliso ezinokuthenjwa kunye nenkxaso yezobuchwephesha ephendulayo.
Umgangatho ophezulu Inkonzo yokuNyema Ixabiso loKhuphiswano
Zonke iimveliso ezenziwe yi-JCZ okanye amaqabane ayo aqinisekisiwe ziinjineli ze-JCZ R & D kwaye ahlolwe ngokungqongqo ngabahloli ukuqinisekisa ukuba zonke iimveliso ezifike kwiindawo zabathengi zinesiphene.
INKONZO ENYE EMISELWEYO
Ngaphezulu kwesiqingatha sabasebenzi kwi-JCZ isebenza njenge-R & D kunye neenjineli zenkxaso yezobuchwephesha ezibonelela ngenkxaso epheleleyo kubathengi kwihlabathi liphela. Ukusuka nge-8: 00 AM ukuya kwi-11: 00 PM, ukusuka ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo, injineli yakho yenkxaso iyafumaneka.
IXABISO LOKUPHAKISHA IPHAKHE
I-JCZ ngumnini zabelo okanye iqabane lobuchule kunye nababoneleli bayo abaphambili. Kungenxa yoko le nto sinexabiso elikhethekileyo kwaye iindleko zinokuncitshiswa ukuba abathengi bathenga njengephakheji.